i-metoprolol succinate vs metoprolol tartrate
Kutheni ndifuna iintonga?
Iintonga zizixhobo ezibonelela ngenkxaso kunye nokulinganisela xa uhamba. Unokufuna i-1 okanye 2 iintonga zokuncedisa ukuxhasa ubunzima bomzimba wakho. Unokufuna iintonga ukuba uye wahlinzwa okanye wenzakala okuchaphazela amandla akho okuhamba.
Ndizisebenzisa njani iintonga ngokukhuselekileyo?
Xhasa ubunzima bakho ngeengalo nangezandla. Musa ukuxhasa ubunzima bakho ngeekhwapha. Oku kungonzakalisa imithambo-luvo esekhwapheni. Gcina ingqiniba yakho igobile xa ikratshi ibekwe phantsi kwengalo yakho.
Hamba kancinci kwaye ngononophelo ngeentonga. Yehla usenyuka izinyuko kunye nezitampu kancinci, kwaye yeka ukuphumla xa uziva udiniwe. Phakama kancinci uye kwindawo yokuma okanye yokuma. Oku kuya kunceda ukuthintela isiyezi kunye nokuphelelwa ngamandla. Sebenzisa iintonga zakho kuphela kumhlaba oqinileyo. Sebenzisa ulumkiso xa uhamba emkhenkceni okanye kwikhephu. Imigangatho emanzi okanye ethanjisiweyo kunye nemigangatho yesamente egudileyo inokuba mtyibilizi. Jonga iirugs ezincinci okanye iintambo.
Ndihamba njani ngeentonga?
Beka zombini iintonga phantsi kweengalo zakho, kwaye ubeke izandla zakho kwizandla zokubamba iintonga. Beka iintonga zakho phambi kwakho kancinci.
Umphezulu weentonga kufuneka ube malunga neminwe emi-2 macala omabini (malunga nee-intshi eziyi-1½) ngaphantsi kwekhwapha lakho. Beka ubunzima bakho ezandleni zakho. Umphezulu weentonga akufuneki ucofe emakhwapheni.
Ukuba unomlenze omnye owenzakeleyo, wugcine phantsi ngokugoba idolo.
Phakamisa iintonga kwaye uzihambise inyathelo phambi kwakho. Beka iirabha zeziphelo zeentonga ngokuqinileyo emhlabeni. Hambisa unyawo olungonzakalanga phakathi kweentonga. Beka isithende kuqala.
Ukuba usebenzisa iintonga zakho ukulinganisa, susa unyawo lwakho lwasekunene kunye necrutch ekhohlo phambili. Emva koko shenxisela unyawo lwakho lwasekhohlo kunye necrutch yasekunene phambili. Qhubeka uhamba ngale ndlela.
Ndingazenyuka njani ngezinyuko ngeentonga?
Jongana nezinyuko. Beka iintonga kufutshane nenyathelo lokuqala.
Push phezu kweentonga kwaye ubeke umlenze wakho ongonzakalanga kwinyathelo lokuqala.
Beka ubunzima bakho kumlenze wakho ongonzakalanga okwinyathelo lokuqala. Yizisa zombini iintonga kunye nomlenze owenzakeleyo kwinyathelo ngexesha elinye.
Xa ubambelele kwitreyini ngengalo enye, beka zombini iintonga phantsi kolunye uhlangothi. Sebenzisa i-railing ukukunceda unyuke izitepsi.
Ndihla njani ngezinyuko ezineentonga?
Yima neenzwane zomlenze wakho ongonzakalanga kufutshane nonqwanqwa lwenyathelo.
Goba idolo lomlenze wakho ongonzakalanga. Thoba kancinci iintonga kunye nomlenze owenzakeleyo uye kwinqanaba elilandelayo.
Yayama ngeentonga zakho. Cothisa umlenze wakho ongonzakalanga kwinyathelo elifanayo.
Beka zombini iintonga phantsi kwengalo enye ngelixa ubambelele kuloliwe ngenye ingalo.
Ndihlala njani esitulweni ngeentonga?
Jika ubuye ubuye kwisitulo de ube uziva umphetho waso ngokuchasene nasemva kwemilenze yakho. Gcina umlenze wakho owonzakeleyo uye phambili.
Thatha iintonga zakho uzikhuphe phantsi kweengalo zakho. Hlala ngelixa ugoba idolo lakho elingonzakalanga.
Ndivuka njani esitulweni ngeentonga?
Hlala emaphethelweni esihlalo sakho.
Pushisa ngezandla zakho usebenzisa iintonga okanye iingalo zesitulo. Beka ubunzima bakho kunyawo lwakho olungonzakalanga njengoko usukuma.
Gcina umlenze wakho owenzakeleyo ugobile emadolweni nasemgangathweni.
Ndifanele ndiqhagamshelane nini nomboneleli wam wezempilo?
Iintonga zakho azikulungeli.
Enye ikratshi inde kunenye.
Iintonga zakho ziyaphuka okanye zilahleke.
Iingcebiso zerabha zeentonga zakho zohlukene phakathi okanye zikhululekile.
Ufumana i-blisters okanye iifowuni ezibuhlungu ezandleni zakho okanye emakhwapheni.
Ikhwapha lakho libomvu, libuhlungu, okanye unamaqhuma okanye amaqhakuva.
Imisipha yengalo yakho iba buthathaka ngokuya usebenzisa iintonga.
Ndimele ndilufune nini ukhathalelo kwangoko okanye nditsalele umnxeba ku-911?
Unokuphelelwa ngamandla ngesandla okanye ingalo.
Iminwe yakho iyaziva ibanda okanye iintlungu zibakho.
Unelungelo lokunceda ekucwangciseni inkathalo yakho. Funda ngemeko yakho yempilo kunye nendlela yokunyanga. Xoxa ngeendlela zonyango kunye nabanikezeli bakho bezempilo ukuba uthathe isigqibo malunga nokhathalelo olufunayo. Uhlala unelungelo lokwala unyango. Olu lwazi lungentla luncedo kwezemfundo kuphela. Akujoliswanga njenge ngcebiso yezonyango kwiimeko ezithile okanye unyango. Thetha nogqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
© Ilungelo lokushicilela IBM Corporation 2021 Ulwazi lusetyenziselwa uMsebenzisi wokuGcina kuphela kwaye alunakuthengiswa, lusasazwe ngokutsha okanye lusetyenziselwe ezinye iinjongo zorhwebo. Yonke imifanekiso kunye nemifanekiso efakwe kwi-CareNotes® yipropathi ene-copyright ye-ADAM, Inc. okanye i-IBM Watson Health
Uhlala ixesha elingakanani i-cyclobenzaprine
metoprolol yi succinate 50 mg
Isiphumo secala le-cephalexin
iziphumo ebezingalindelekanga ze tapazole
I-oval emhlophe rp 15